Kooxda Roma oo doonaysa inay heshiisyada Chris Smalling iyo Henrikh Mkhitaryan ka dhigto kuwo joogto ah – Gool FM
(Rome) 24 Feb 2020. Kooxda Roma ayaa rajeynaysa inay si joogto ah ula wareegto labadan ciyaaryahan ee kala ah; Chris Smalling iyo Henrikh Mkhitaryan dhammaadka xilli ciyaareedka, kuwaas oo iminka heshiis amaah kula joogan kooxdan.
30-sano jirka daafaca dhexe ee Smalling ayaa Kooxda reer Talyaani kaga soo biiray Manchester United, wuxuuna tan iyo markaas u saftay 26 kulan tartammada oo dhan naadiga uu hogaamiyo Paulo Fonseca.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Armenia, Mkhitaryan ayaa waxa uu la dhibtoonayaa dhaawacyo tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay Arsenal, laakiin waxa uu dhaliyay gool isagoo sameeyey caawin kulankii ay Roma 4-0 kaga badisay Lecce kulan ciyaareed dhacay Axaddii.
Isaga oo la hadlayay Sky Sports News, Fonseca waxa uu yiri: “Chris waa nin wayn, xirfadle wayn, waxaynu doonayna inuu nala sii joogo.”
“La qabsiga kubadda cagta Talyaaniga aad ayey ugu fududahay isaga, waa wiil uu qof walba jecel yahay kooxda, maxaa yeelay waa xirfadle wayn.”
“Waan jeclaan lahaa inuu Chris sii joogo, waan hadlaynaa, ma ogi inay macquul tahay sababtoo ah xaaladda Manchester United, laakiin waxaan jeclaan lahaa in Chris uu halkaan nala joogo, maxaa yeelay aad ayuu muhiim u yahay, sidoo kale waxaan jeclahay inaan Mkhi kooxdeenna ku sii hayno.”
Roma ayaa haatan fadhisa kaalinta shanaad ee kala horreynta horyaalka Serie A, waxayna sii wadayaan ciyaaristooda tartanka Europa League Khamiista marka ay u safrayaan Belgium-ka si ay ula soo ciyaaraan kooxda Gent.